3 သင်၏ရောင်းအားတိုးတက်စေမည့် Multichannel Strategies - အများသုံးသတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဧပြီလ 8, 2021 ဧပြီလ 7, 2021 Stephanie Snyder B2B, ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, အသားပေးသတင်းများ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားအွန်လိုင်း, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်, B2B အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်, လက်ကားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်, လက်ကား, လက်ကား - B2B, လက်ကား & B2B စျေးကွက်, လက်ကားစျေးကွက်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုနှင့်ပြန်လည် ၀ ယ်ယူခြင်းကိုဆက်ထိန်းထားခြင်းသည်ငွေပေးချေမှုတိုင်းအတွက်အားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ pruchase တိုးမြှင့်ရှုပ်ထွေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အောက်တွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သော multichannel နည်းဗျူဟာသုံးခုသည်သင်၏နံပါတ်များကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ပြန်လည်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိပြီးသူတို့အရင်ကကြည့်ရှုခဲ့သည့်သီးခြားထုတ်ကုန်များကိုသတိပေးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
စနစ်တကျရှိသောစီးပွားရေးသည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်တွင်ဖောက်သည်များကိုပိုမိုဆွဲဆောင်သည်။ Multichannel ဖြစ်ခြင်းသည်ပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ရှိနေခြင်းထက်မကဆိုလိုသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ရောင်းဝယ်မှုသို့ဘာသာပြန်ဆိုသည့်စွမ်းရည်ကိုပြသသည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုသင်ပေါ်ထွက်လာသည်။
များသောအားဖြင့်သင်သည်လမ်းကြောင်းများစွာကိုစာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကိုရွေးချယ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, Omni channel customer support သည်သင်၏စီးပွားရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်? ယင်း၏အခန်းကဏ္definကိုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၌ပိုမိုရိုးရှင်းသောနည်းဗျူဟာရှိသည်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုစျေးကွက်သို့ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖောက်သည်များကပြောနိုင်သည်။ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားအားထုတ်ပါစေရောင်းအားနည်းနည်းပဲရလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ကိုက်ညီသောလမ်းကြောင်းများကိုသတိပြုခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ အခြားအရာအားလုံးထွက်ကျန်ရစ်ရရှိသွားတဲ့။
ထို့အပြင်သင်၏ပရိသတ်ကို ဦး စွာစောင့်ရှောက်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမတူညီသောလိုင်းများမှမည်သို့လက်ခံမည်ကိုစဉ်းစားပါ။ Multichannel သည်သင်ဖြတ်သန်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းကိုဖောက်သည်များနားလည်မှသာအရောင်းသို့ဘာသာပြန်သည်။ ၄ င်းသည်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောလမ်းကြောင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောမှတ်စုများကိုရေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ပါဝင်နိုင်သည် -
တိကျတဲ့လိုင်းများအတွက် 2. သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာ
ပုံမှန်အားဖြင့်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သောအရာသည်အခြားတစ်ခုအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ချန်နယ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးရောင်းအားပိုရဖို့လိုတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမက်ဆေ့ခ်ျများဖန်တီးခြင်း၏အရေးပါမှုကိုသင်နားလည်ရမည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပရိသတ်များသည်ဖတ်ရန်နှင့်မေးခွန်းများမေးရန်အချိန်ယူရသောကြောင့်အချို့သည်ရှည်လျားစွာရေးသားထားသောအကြောင်းအရာများကိုရှင်သန်ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခြားသူများကိုသတင်းစကားတလျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသောထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်တွေရှိခြင်းမှာ Excel ။ သူတို့ကိုသင်ရောနှောလိုက်လျှင်၊ သင်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်သို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်။
ထို့ကြောင့်, Multichannel စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ထိပ်ဆုံးခြေလှမ်းများအသီးအသီးအဘို့အလုပ်မလုပ်သောအရာကိုဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤအခွင့်အရေးကိုရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ရောင်းအားသည်စတင်စီးဆင်းလာပြီးသင်၏စီးပွားရေးသည်လည်းကြီးထွားလာသည်။ ဒီနေရာမှာဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သင်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Multichannel Expert ကိုငှားရမ်းခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သင်၏အလုပ်ကိုသူတို့နားမလည်နိုင်သောကြောင့်အလုပ်အားလုံးကိုသူတို့ကိုမထားခဲ့ပါနှင့်။ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစီအတွက်အယူအဆများကိုဖြတ်ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာရန်အချိန်ကိုခွဲဝေချထားပါ။ မှတ်ချက်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများမှတစ်ဆင့်ဖောက်သည်၏တုံ့ပြန်ချက်မှတစ်ဆင့်သင်ဘာလုပ်နေသည်၊ တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်
၃။ Re-marketing ကြော်ငြာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
တစ်ခါတစ်ရံဖောက်သည်များသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်အချို့သောထုတ်ကုန်များကိုကြည့်ပြီး၎င်းတို့ကိုလှည်းပေါ်တင်ပါ။ သို့သော်ဤပစ္စည်းများသည်ထိုနေရာတွင်ထိုင်လေ့ရှိပြီးအချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်စွန့်ပစ်ခံရသည်။ ၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုသင်ကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်။
Re-marketing သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အမြဲထိတွေ့နေပြီးသူတို့အရင်ကကြည့်ရှုခဲ့သည့်သီးခြားထုတ်ကုန်များအတွက်သတိပေးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ လိုင်းပေါင်းများစွာတွင်ဤကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်၊ သင်လှည်း၏ပစ္စည်းသည်ရောင်းအားဖြစ်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဖောက်သည်တွေသူတို့လှည်းပေါ်တင်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးကိုမှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူး၊ ဒါကသူတို့ကိုညင်ညင်သာသာသတိပေးဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။ Multichannel ကိုပြန်လည်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ရောင်းအားတိုးတက်လာခြင်းနှင့်စင်မြင့်ပေါ်မှပျံသန်းသည့်ပစ္စည်းများပိုများလာတာကိုသင်သတိပြုမိသည်။
များသောအားဖြင့်သင်သည်ဤထုတ်ကုန်များအတွက်စွဲမက်ဖွယ်ကြော်ငြာများကိုဖန်တီးသောအခါ၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ နောက်မှသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလမ်းကြောင်းများအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ပေးသည့်ပစ်မှတ်အစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ သင်သည်နောက်ထပ်သွားပြီးအလားအလာရှိသောဖောက်သည်တစ် ဦး စီကို ID တစ်ခုသတ်မှတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သူတို့၏ cookies များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထိုနည်းအားဖြင့်သင့်တော်သောကြော်ငြာများကိုသူတို့၏တစ်လျှောက်လုံးပို့ပေးသည်။
ထိုသို့သောပစ်မှတ်ထားခြင်းသည်အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်မှလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအထိရှုထောင့်တိုင်းကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ ရလဒ်မှာရောင်းအားနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့ဖြစ်သည်။
Multichannel နည်းဗျူဟာများကသင့်အားသင်၏ရောင်းအားများပိုမိုရောင်းချနိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ သို့သော်၊ သင်အတွက်အလုပ်လုပ်သောလမ်းကြောင်းများကိုဖော်ထုတ်ပြီးတစ်ခုချင်းစီအတွက်မှန်ကန်သောသတင်းစကားများရှိရမည်။ ထို့အပြင်ပြန်လည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ဖောက်သည်များသည်ယခင်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့သောထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်မှတ်မိစေရန်ကူညီသည်။
အများပိုင်သတင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Multichannel အရောင်း မဟာဗျူဟာ